वर्षमा १० किलोमिटर सडक नबनेको देशमा दैनिक ६ किमी बनाएको छु, म हुँदा हुँदै कसलाई मत दिनुहुन्छ ? प्रम ओली — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > वर्षमा १० किलोमिटर सडक नबनेको देशमा दैनिक ६ किमी बनाएको छु, म हुँदा हुँदै कसलाई मत दिनुहुन्छ ? प्रम ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार आएपछि विकास निर्माणको कामले तिब्रता पाएको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै लामो समयपछि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आएको र अझै याङरी र लाक्रेबाट पानी ल्याएपछि काठमाडौंमा पानीको अभाव नहुँने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण भइरहेको, धरहरा बनेको छ, रानीपोखरी बनेको, दरबार स्कुल बनेको छ, अस्पताल, विद्यालय केही निर्माणको क्रममा रहेको स्मरण गराउनु भयो ।
वर्षमा १० किलोमिटर बाटो नबन्ने देशमा यो सरकारले दैनिक ६ किलोमिटर बाटो निर्माण गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो । सरकारले विकासको कामलाई धेरै तिब्रताका साथ काम गरेको बताउनु भयो । सरकार अझै पनि १२ वटा नयाँ बस्ती बनाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई माथी उठाउने काममा लागि रहेको स्मरण गराउनु भयो । सरकार आधुनिक शिक्षा, प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले धान, मकैको उत्पादन ६ प्रतिशतले उत्पादन बढेको जानकारी गराउँदै सरकार अन्धाधुन्धा रुपमा अघि नबढेको बताउनुभयो ।
‘म सरकारमा आउँदा लाखौ मानिस रोजगारीको लागि विदेश जाने गरेका थिए’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले कम भएको छ । बाँझो बारी हराभरा भएको छ । मानिसलाई उत्पादनमा लगाउने काम भएको छ ।’ उहाँले रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रम समेत सुरु गरेको बताउनुभयो ।
२०७८ सालमा सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउँने जानकारी गराउँदै तीन वर्षमा नेपाल मान्छे बस्न लायत देश बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘यती धेरै काम भएको छ । यति हुँदा पनि कमरी मत नदिई बस्नुहोला’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ‘म हुँदा हुँदै माननीयहरुले अरु कसलाई मत दिनुहोला र ?’ ओलीले आफू यही सदनको बलले प्रम बनेको र यही सदनको बलले फेरी प्रम बन्ने जानकारी गराउनु भयो । कुनै दलले मत नदिनु भनेर आएको भएपनि नेतालाई भनेर यही मत दिन र पछि त्यसलाई मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकार चाँडै कोरोना नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेको र कोरोना सर्न नदिएपछि यो पराजित हुने तर्क गर्नुभयो । सबैलाई मास्क लगाउन, दुरी कामय गर्न, हात धुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू काममा लागेको भएर कुनै माननियहरुलाई फोन गर्न नभ्याएको भन्दै अब प्रमले वास्था गरेन भनेर भन्ने दिन नआउने बताउनु भयो ।
२०७८ वैशाख २७ गते १४:४० मा प्रकाशित
प्राइम बैंकसहित तीन कम्पनीको २ करोड १३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
सामुदायिक लघुवित्तका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओ बैंकिङ कसूरमा पक्राउ, यस्ता छन् अभियोग
छठ पर्वको रौनकता गौरीघाट गुह्वेश्वरीः फोटोकथा